ကလေးမှာ ပွငျးထနျတဲ့အသကျရှူလမျးကွောငျးပွဿနာတှရှေိနလေားဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးမှာ ပွငျးထနျတဲ့အသကျရှူလမျးကွောငျးပွဿနာတှရှေိနလေားဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
1. အရပွေား ပွာနှမျးခွငျး
မကျြနှာနဲ့ရငျဘတျတဈဝိုကျ အရပွေားမြား နီရဲပွာနှမျးခွငျးမြိုးကို ဆိုလိုပါတယျ။ ကလေးအသကျအရှယျ မ ရှေးတှငျ ဖွဈပျေါနိုငျပွီး အဆုတျ သို့မဟုတျ နှလုံးရောဂါတဈမြိုးမြိုးရှိခွငျးကို ဖျောပွနတောဖွဈပါတယျ။
ဘာလုပျသငျ့လဲ- နီးစပျရာဆေးရုံသို့ အမွနျသှားပါ။ ဖွဈနိုငျလြှငျ လူနာတငျကားကို ဖုနျးဆကျချေါသငျ့ပါတယျ။
2. အသကျရှူထုတျစဉျ တရှီရှီမွညျခွငျး
သငျ့ကလေး အသကျရှူထုတျတိုငျး ရှီရှီအသံမြားကွားနရေပါက အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ပွဿနာ တဈခုခုဖွဈပျေါနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ လပွှေနျရောငျယမျးခွငျး၊ အဆုတျပိုးဝငျခွငျးနဲ့ ပနျးနာရငျကပျြရှိသူတို့တှငျ တှရှေိ့ရတတျပါတယျ။
ဘာလုပျသငျ့လဲ- ထိုသို့ တရှီရှီမွညျခွငျးဟာ သူ့အလိုလိုပြောကျကငျးမှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မဟုတျပါက အခြိနျကွာတာနဲ့အမြှ ကလေးငယျမှာ အောကျဆီဂငျြပွတျတောကျမှု ဖွဈပျေါနိုငျ လို့ ဖွဈပါတယျ။ Nebulizer စကျမြားကို အသုံးပွုပွီး ဆေးနဲ့ရနှေေးငှရှေူ့ခွငျးကို ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြဖွငျ့ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
3. နံရိုးကွား ကွှကျသားမြား ခြိုငျ့ဝငျခွငျး
ကလေးအသကျရှူတိုငျးတှငျ နံရိုးတဈခုစီကွားရှိ ကွှကျသားမြား ခြိုငျ့ဝငျနတောကို တှရေ့ပါသလား? ဒါဆိုရငျ တော့ သငျ့ကလေးငယျတှငျ အသကျရှူလမျးကွောငျးပိတျဆို့ခွငျး ဖွဈပျေါနနေိုငျပွီး စိုးရိမျဖှယျရှိပါတယျ။
ဝဖွိုးသော ကလေးငယျမြားကိုမူ နံရိုးကွှကျသားအစား ညှပျရိုးနဲ့လညျပငျးကိုလလေ့ာပါ။ အသကျရှူတိုငျး လညျပငျးကွှကျသားမြား တငျးမာနပေါက အလားတူပွဿနာရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဘာလုပျသငျ့လဲ- နီးစပျရာဆေးရုံသို့ အမွနျဆုံးသှားရောကျပါ။ သငျ့ကလေးငယျတှငျ ကွှကျသားခြိုငျ့ဝငျမှုမှာ သိပျမဆိုးဝါးဘဲ အိမျတှငျ nebulizer စကျ အသငျ့ရှိနပေါက ဆေးရုံသို့မသှားပဲ အိမျတှငျစောငျ့ကွညျ့နိုငျပါ တယျ။ သို့သျော တရှီရှီမွညျခွငျးနဲ့ nebulizer စကျကို တဈခါမှမသုံးဖူးသော ကလေးငယျမြားတှငျ ကွှကျသား ခြိုငျ့ဝငျခွငျး အနညျးငယျသာရှိစကောမူ ဆေးရုံသို့ အမွနျသှားရောကျသငျ့ပါတယျ။
4. နှာခေါငျးပှယောငျးယောငျးဖွငျ့ အသကျရှူခွငျး
အသကျရှူကပျြခွငျး သို့မဟုတျ နှာခေါငျးပိတျခွငျးရဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါပဲ။ အသကျရှူလိုကျတိုငျး နှာခေါငျး ပေါကျမြား ပှယောငျးယောငျးဖွဈလာတာကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ သို့သျော နှာခေါငျးပှခွငျးကို သာမာနျ တုတျကှေးဖွဈခြိနျမှာလညျး တှနေို့ငျတာမို့ ကွီးမားသောအသကျရှူလမျးကွောငျး ပွဿနာရှိ/မရှိကို သခြော ခှဲခွားသငျ့ပါတယျ။
ဘာလုပျသငျ့လဲ- ပထမဆုံးလုပျရမှာကတော့ ဆားရညျနဲ့ နှာခေါငျးအစကျခပြွှနျကိုသုံးပွီး နှာခေါငျးတှငျးသို့ ဆားရညျမြား အစကျခပြေးပါ။ ကလေးကွီးမြားကိုမူ နှာခေါငျးကိုလကျဖွငျ့ညှဈဖို့ တိုကျတှနျးနိုငျပါတယျ။
ဆေးခနျးပွဖို့ မလှယျကူပါက ဆားရညျကို နှာခေါငျးတဈဖကျစီတှငျ ၂စကျခနျ့ ခပြေးခွငျးဖွငျ့ နှာပိတျခွငျးကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
1. အရေပြား ပြာနှမ်းခြင်း
မျက်နှာနဲ့ရင်ဘတ်တစ်ဝိုက် အရေပြားများ နီရဲပြာနှမ်းခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကလေးအသက်အရွယ် မ ရွေးတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အဆုတ် သို့မဟုတ် နှလုံးရောဂါတစ်မျိုးမျိုးရှိခြင်းကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလုပ်သင့်လဲ- နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ အမြန်သွားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် လူနာတင်ကားကို ဖုန်းဆက်ခေါ်သင့်ပါတယ်။
2. အသက်ရှူထုတ်စဉ် တရွီရွီမြည်ခြင်း
သင့်ကလေး အသက်ရှူထုတ်တိုင်း ရွီရွီအသံများကြားနေရပါက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လေပြွန်ရောင်ယမ်းခြင်း၊ အဆုတ်ပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူတို့တွင် တွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။
ဘာလုပ်သင့်လဲ- ထိုသို့ တရွီရွီမြည်ခြင်းဟာ သူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါက အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ ကလေးငယ်မှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင် လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Nebulizer စက်များကို အသုံးပြုပြီး ဆေးနဲ့ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
3. နံရိုးကြား ကြွက်သားများ ချိုင့်ဝင်ခြင်း
ကလေးအသက်ရှူတိုင်းတွင် နံရိုးတစ်ခုစီကြားရှိ ကြွက်သားများ ချိုင့်ဝင်နေတာကို တွေ့ရပါသလား? ဒါဆိုရင် တော့ သင့်ကလေးငယ်တွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်ပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
၀ဖြိုးသော ကလေးငယ်များကိုမူ နံရိုးကြွက်သားအစား ညှပ်ရိုးနဲ့လည်ပင်းကိုလေ့လာပါ။ အသက်ရှူတိုင်း လည်ပင်းကြွက်သားများ တင်းမာနေပါက အလားတူပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလုပ်သင့်လဲ- နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပါ။ သင့်ကလေးငယ်တွင် ကြွက်သားချိုင့်ဝင်မှုမှာ သိပ်မဆိုးဝါးဘဲ အိမ်တွင် nebulizer စက် အသင့်ရှိနေပါက ဆေးရုံသို့မသွားပဲ အိမ်တွင်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါ တယ်။ သို့သော် တရွီရွီမြည်ခြင်းနဲ့ nebulizer စက်ကို တစ်ခါမှမသုံးဖူးသော ကလေးငယ်များတွင် ကြွက်သား ချိုင့်ဝင်ခြင်း အနည်းငယ်သာရှိစေကာမူ ဆေးရုံသို့ အမြန်သွားရောက်သင့်ပါတယ်။
4. နှာခေါင်းပွယောင်းယောင်းဖြင့် အသက်ရှူခြင်း
အသက်ရှူကျပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ အသက်ရှူလိုက်တိုင်း နှာခေါင်း ပေါက်များ ပွယောင်းယောင်းဖြစ်လာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် နှာခေါင်းပွခြင်းကို သာမာန် တုတ်ကွေးဖြစ်ချိန်မှာလည်း တွေ့နိုင်တာမို့ ကြီးမားသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြဿနာရှိ/မရှိကို သေချာ ခွဲခြားသင့်ပါတယ်။
ဘာလုပ်သင့်လဲ- ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ ဆားရည်နဲ့ နှာခေါင်းအစက်ချပြွန်ကိုသုံးပြီး နှာခေါင်းတွင်းသို့ ဆားရည်များ အစက်ချပေးပါ။ ကလေးကြီးများကိုမူ နှာခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ညှစ်ဖို့ တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။
ဆေးခန်းပြဖို့ မလွယ်ကူပါက ဆားရည်ကို နှာခေါင်းတစ်ဖက်စီတွင် ၂စက်ခန့် ချပေးခြင်းဖြင့် နှာပိတ်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။